उपरखुट्टी लगाएर बस्नुहुन्छ ? सावधान ! - Samachar Post Dainik
जस्तो हामीमध्ये धेरैजसो एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा चढाएर बस्ने गर्छौं, जसलाई चलनचल्तीको भाषामा उपरखुट्टी लगाएको भनिन्छ । यसरी बस्नुलाई हाम्रो समाजमा त्यती शोभनिय मानिदैन । खासमा खुट्टा क्रस गरेर वा उपरखुट्टी लगाएर बस्नुसँग शिष्टचारको कुरा किनपनि जोडिएको रहेछ भने, यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेछ।
यसको असर खुट्टामा मात्र पर्ने होइन । यसले गर्दन
र ढाँडमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
भेरिकोज भेन्समा नसा बढेको हुन्छ । कुनैपनि नसा भेरिकोज भेन्स नै हुनसक्छ । तर सबैभन्दा प्रभावित नसा हाम्रो खुट्टा र खुट्टाको पञ्जामा हुन्छ । त्यही कारण उभिदा वा घुम्दा हाम्रो तल्लो भागको नसामा दबाब बढ्छ । भेरिकोज भेन्स सामान्यत छालाको सतहमा देखिने निलो नसा हो । कहिले काहीँ यसले
गंभिर समस्याको रुप लिन्छ ।
हुन त चिकित्सकहरु अझैपनि यसमा स्पष्ट छैनन् कि, उपरखुट्टी लगाउँदा त्यसले भेरिकाज नसाको कारण बन्छ कि बन्दैन । यद्यपी अधिकांश चिकित्सकले के भन्ने गरेका छन् भने, उपरखुट्टी लगाएर बस्दा त्यसले रक्त प्रवाहमा नराम्ररी असर पु¥याउँछ ।मांसपेशीलाई असर
उपरखुट्टी लगाएर बस्दा घुँडाको ठिक विपरितको मांसपेशीमा दबाब पर्छ, जसले खुट्टाको तल्लो भाग र खुट्टामा उत्तेजना पैदा गर्छ । यदि हामी लामो
समयसम्म यही पोजिसनमा बस्यौं भने खुट्टाको मांसपेशी कमजोर एवं शिथिल हुनपुग्छ । पछि यही कारण मांसपेशी दुख्ने समस्या पनि हुनसक्छ ।
प्रकाशित मिति २२ कार्तिक २०७७, शनिबार ०२:३१